Ny Galaxy Watch 3 dia mahazo fihatsarana amin'ny metatra oxygen oxygen | Androidsis
Ny fanoloran-tenan'i Samsung amin'ny smartwatches amin'ity taona ity dia mifantoka amin'ny Galaxy Watch 3, smartwatch izay natolony tamin'ny volana aogositra lasa teo ary ao anatin'izany ny ECG sy metatra oxygen oxygen. Ny fiasa ahafahana manao electrocardiograms (ECG) dia navadika tamin'ny faran'ny volana septambra ary tonga tamin'ny fanavaozana vaovao.
Ny bandy any Samsung vao namoaka a fanavaozana vaovao ho an'ity maodely ity any Eropa, fanavaozana izay navoaka tany Korea Atsimo herinandro roa lasa izay ary ny nomeraony dia R8xxXXU1BTK1. Inona no vaovao amin'ity fanavaozana vaovao ity?
Ny endri-javatra vaovao voalohany amin'ity fanavaozana ity dia fanatsarana lehibe ao amin'ny fotoana handrefesana ny haavon'ny oxygen oxygen. Ny zava-baovao faharoa dia hita amin'ny fampiharana hanaraha-maso ny fampihetseham-batana ataontsika, izay misy torolàlana ho an'ny fampandrenesana izay mampahafantatra antsika hatrany ny fandrosoana sy / na ny mari-pahaizana azontsika raha mampiasa headset bluetooth isika.
Mety mbola mila andro vitsivitsy vao hahatratra ny firenena eropeana isan-karazany ny fanavaozana, dia mila izany fotsiny ianao miandrasa handray ny fanavaozana mifanaraka amin'izany manasa anao aho hanavao.
Vidio ny Samsung Galaxy Watch 3
Ny Samsung Galaxy Watch 3 dia misy amin'ny alàlan'ny tranokala Samsung pna 399 euro amin'ny kinova bluetooth sy 439 euro miaraka amin'ny fifandraisana 4G, ka toa ny zoma mainty misy antsika dia tsy hita taratra amin'ity fitaovana vaovao ity, zavatra iray mahazatra indrindra amin'ireo mpanamboatra rehetra raha resaka vokatra vaovao eny an-tsena.
Safidy mahaliana ary raha tsy te handany vola be ianao amin'ny zoma mainty ary te hividy smartwatch ianao, azonay ampiasaina ny Galaxy Watch Active amin'ny vidiny 129 euro ary ny Samsung Galaxy Watch tany am-boalohany amin'ny vidin'ny 184 euro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny Galaxy Watch 3 dia mahazo fihatsarana amin'ny metatra ôksizenan'ny rà
Ny Galaxy S21 dia afaka mamoha amin'ny alàlan'ny baikon'ny feo